Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » 65% nke ndị njem ụgbọelu US na -akwado paspọtụ ọgwụ mgbochi ọrịa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
65% ndị njem ụgbọ elu na -akwado paspọtụ Vaccine
Ọ bụrụ na FAA kpebiri itinye mmemme paspọtụ ọgwụ mgbochi ọrịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime ndị njem iri ga -amachibido ịbanye n'ụgbọ elu.
44% nke ndị Republican kwuru na ha ga -akwado ihe gọọmentị chọrọ iji nye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi iji fee.
48% nke ndị Republican ga -akwadokwa iwu ozugbo site na ụgbọ elu azụmahịa.
95% nke ndị Democrats ga -akwado ma gọọmentị ma ọ bụ azụmahịa paspọtụ ọgwụ mgbochi ụgbọ elu chọrọ.
Dika ihe dị iche iche nke delta na -eme, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65% nke ndị na -ede akwụkwọ na -agakarị na -akọ na paspọtụ ọgwụ mgbochi ga -eme ka ntụkwasị obi ha na nchekwa njem ikuku dị ka akụkọ ọhụrụ si dị. Ọ bụ ezie na 90% nke ndị na -efe efe ugboro ugboro na -agba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu onye n'ime mmadụ 10 na -ajụkarị ịgba ọgwụ mgbochi.
Nọmba ndị a na -agba ume n'ihi na akwụkwọ mmado na -enwekarị ọgwụ mgbochi dị elu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na FAA kpebiri mejuputa a mmemme paspọtụ ọgwụ mgbochi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu onye n'ime ndị njem iri ga -amachibido ịbanye n'ụgbọelu.
Emere nyocha ahụ site na iji ọdụ data Flyer Frequent, nke gụnyere ihe karịrị 200,000 nbanye na-agakarị akwụkwọ mgbasa ozi si n'ofe United States. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65% nke ndị sonyere nyocha karịrị afọ 60, na-etinye ha n'ụdị ihe egwu maka ọrịa siri ike sitere na COVID-19.
Industrylọ ọrụ njem bụ otu n'ime nsogbu kacha sie ike n'oge ọrịa na -efe efe, yana mmachi na -amanye njem na njem nlegharị anya ịkwụsị. Iweghachite adịla ngwa. N'ime nyocha nyocha ugboro ugboro nke 2020, 60% nke ndị zara zara kwuru na ha nwere atụmatụ njem n'ime ọnwa isii na -abịanụ. Agbanyeghị na akụkọ nke afọ a, 36% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha emebeghị njem kemgbe Jenụwarị 2020.
Ma agụụ maka njem na -abawanye. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha nwere atụmatụ iji ụgbọ elu eme njem n'ime ọnwa isii na -abịanụ, ebe 72% nke ndị njem ahụ na -eme atụmatụ njem nkeonwe.